IMandalasandal Ngena kwaye uyonwabele kwi-Mandalas.wiki
IMandalas Ziyilo olunomdla kubantu abaninzi kwaye luzisa izibonelelo engqondweni. Okokuqala, kubalulekile ukwazi ukuba ukudala imizobo ekwimo yesangqa yinto endala kakhulu.
Iirekhodi zokuqala zeemandala zisusela kwinkulungwane ye-XNUMX, kwingingqi yeTibet. Ukusasazeka nakwamanye amazwe aseMpuma, njenge-India, China kunye nase Japan Kuzo zonke iindawo igama elithi mandala ngu intetho evela kwiSanskrit , oko kukuthi isangqa. Ngokuqhelekileyo zisetyenziselwa izithethe zonqulo okanye njengendlela yokuxininisa ngexesha lokucamngca.
Kweli nqaku uza kufunda ngakumbi ngembali yobu bugcisa bamandulo buqhubeka nanamhlanje kwaye ufumane ukuba zeziphi izibonelelo zomzimba kunye nengqondo. Kananjalo kuba kuqhelekile ukufumana iincwadi for imibala kunye neeTattoo ezimele iintlobo ezahlukeneyo zeemandala.
IsiMandala ligama elivela kulwimi lwesiSanskrit, oluthathwa njengolufileyo noluthetha isangqa Nangona kunjalo, nangoku, iSanskrit ithathwa njengenye yeelwimi ezingama-23 ezisemthethweni zaseIndiya, ngenxa yokubaluleka kwayo kubuHindu nobuBuddha.
Ke, ii-mandala ziyilo Ubunjani beemilo zejiyometri . Oko kukuthi, bakhula kwiziko elinye. Ukususela ekuqaleni, imizobo ibizwa yantras , eligama elisuka kwiilwimi ezithethwa kusingasiqithi waseHindustani ngesixhobo. Oko kukuthi, iimandala Zindlela zokufezekisa injongo ethile hayi injongo uqobo.
Ezi njongo zijolise ekutshintsheni ngokweenkcubeko nganye eziqwalaselweyo. Uninzi lwazo, i-mandalas isebenza njengendlela yoxinzelelo yokucamngca. Ukuba kungekuphela nje ukugxila kwiifom, kodwa ukwakhiwa komzobo kubaluleke kakhulu.
Imilo inokwenziwa ngezinto ezahlukeneyo, kodwa zihlala zinemibala egqamileyo. Eyona ndlela iqhelekileyo yokwenza i-mandalas kukuhamba yee-inki ezinemibala kwiphepha okanye kwinqanawa. Nangona kunjalo, ezinye iitempile zamaBuddha zigcina isithethe sokwenza i-mandala ngensimbi okanye ngomthi.
Kukho enye indlela yokwenza i-mandala ekhethekileyo ngakumbi, eyenziwa ziimonki zamaBhuda kwezinye iitempile kwihlabathi liphela. Kwezi tempile, iimonki zifunde ubugcisa bokwenza i-mandalas ngayo isanti enemibala ebudeni beminyaka. Ukuzoba kungathatha iiyure okanye iintsuku ukugqiba kwaye xa umzobo ugqityiwe uyatshatyalaliswa kwangoko. Kungelo xesha kuphela apho izinto ezisetyenzisiweyo zilahlwayo emlanjeni. Obu bugcisa bubonisa ukuba yonke into ebomini ayifani.
Zadalelwa phi kwaye nini?
Iirekhodi zokuqala zokudalwa kweemandala zibuyela umva Inkulungwane ye-XNUMX, kwingingqi apho kubekwe khona iTibet . Ukususela ekuqaleni, imizobo yayisetyenziswa kwinkolo yobuBuddha njengendlela yoxinzelelo kunye noncedo ekucamngeni.
Kwangelo xesha linye ii-mandala zafunyanwa nakwimimandla yase-Indiya, e-China nase-Japan, kunjalo, kungekuko kwi-Buddhism kuphela, kodwa nakwi-Hinduism nakwi-Taoism, apho iisimboli ze-yin ne-yang zithathwa njenge mandala .
Nangona kunjalo, zonke iinkonzo zithatha imifanekiso njengento Ngcwele , ehlala ibonisa isangqa sobomi. Kweminye imiba yobuBuddha, i-mandalas iboniswa njengezigodlo zezithixo kwaye ke zingcwele.
Nangona kunjalo, nangona iirekhodi zokuqala ezisemthethweni zazivela eMpuma, kwafunyaniswa ukuba abemi belizwekazi laseMelika bakwasebenzisa imilo yejometri egxile kwizithethe. Ingakumbi kwiinkonzo ezinxulumene nokuphilisa. Phakathi kwenkulungwane ye-XNUMX neye-XNUMX, icawa yaqala ukusebenzisa imizobo kwi ubugcisa obungcwele kunye neglasi enamabala ngaphakathi importantes izakhiwo .
Ngexesha elifanayo, umbono we-alchemy usasazeka, apho amakhulu ezenzululwazi afunda ngeendlela zokuguqula izinto. I-Mandalas nayo ibandakanyiwe koku, kuba imizobo ivela kwimibhalo ye-hermetic ebhalwe ngelo xesha. Ke, kuyaziwa ukuba abantu bahlala benomdla othile kwindlela eyakhiwa ngayo imizobo, eqhubekayo unanamhla.
Njengoko sele kutshiwo, uguqulelo olululo lwegama elithi mandala ukusuka kulwimi lwesiSanskrit ngu isangqa. Isangqa besisetyenzisiwe kangangeenkulungwane ukumelwa kokudlula kobomi okanye kwibhotwe loothixo eliza kunqulwa. Nangona kunjalo, oku kuyahluka ngokwenkcubeko.
Umzekelo, kubuHindu ii-mandalas zisetyenziselwa ukumela ubomi kuyilo lendalo. Apha, bamele ukudityaniswa kunye nemvisiswano kuyo yonke into efuna ukwenziwa.
KwiBuddhism, banamandla izixhobo zokucamngca nanjengoko benesakhono sokutsala umdla kwiimilo zabo nakwimibala. Ngokwenkolo, zisenokusetyenziselwa ukumela ubufutshane bobomi, xa zilungiselelwe ngesanti kunye neendawo zokuhlala oothixo.
Kwinkcubeko yeTaoist, ifilosofi ye-yin yang isebenzisa ukumelwa kwayo kwe-mandala. Apha, umanyano lweesimboli ezimbini luyinto epheleleyo kwaye imele ibhalansi ekufuneka igcinwe kuzo zonke iinkalo zobomi. Kwiidolophu zangaphambi kwekoloniyali, nangona kunjalo, kukho imiqondiso yokuba imizobo yayisetyenziswa kwiminyhadala yokuphilisa.
Zeziphi iintlobo zeemandala ezikhoyo?
Njengoko sele kukhankanyiwe, izixhobo ezahlukeneyo zinokusetyenziselwa ulwakhiwo lweemandala. Ngale ndlela, nganye imele into eyahlukileyo, enjengempilo yomntu okanye impilo yakhe, xa isetyenziswa njengesipho komnye umntu. Jonga apha ezona ntlobo ziphambili zeemandala kunye nokuba zezantoni.
I-sandal mandala isithethe phakathi kweemonki zaseTibet. Kobu bugcisa, imizobo yenziwa emhlabeni ngesanti enemibala kwaye iyinto yesiko kwinkcubeko yamaBuddha.
Ngaphambi kokuba baqale ukwenza i-mandalas yentlabathi, iimonki ziye zafunda ubuchwephesha iminyaka kwaye zenza iintsuku zokucamngca kwangaphambili ukulungiselela. Umsebenzi uhlala uthatha iiyure ukulungiselela kwaye ekugqibeleni yonke into iphoswa emlanjeni okanye komnye umthombo wamanzi abalekayo.
Umbono kukumela Ubufutshane bayo yonke imiba yobomi , kuba yonke into izakube igqityiwe kwiyure. Ngale ndlela, bakwabonisa entsha qala njengoko kuhlala kunokwenzeka ukwenza uyilo olutsha lwesanti.
Omnye umzekelo wesiko lamaBuddha zii-mandala ezenziwe ngezinto ezinjengokhuni okanye i-iron. Apha banokuthatha imilo enamacala amathathu kwaye zisetyenziswa ngokubanzi njenge ukumelwa kwekhaya lothixo othile.
Zikwasetyenziswa ngokubanzi njengezipho. Ngale ndlela, inkqubo ilawulwa ngamasiko nezithethe ezohlukeneyo, oko kuthetha intumekelelo, njengoko kulungile ukufumana imandala njengesipho esivela komnye umntu.
Kwisiko lamaHindu kuyinto eqhelekileyo ukufumana i-mandala epeyintiweyo kwiitempile ezahlukeneyo nakwezinye iindawo ezingcwele. Imibala eqaqambileyo iyasetyenziswa kwezi ndlela, zihlala zihlala zikhona zimele ezohlukeneyo chakras yomzimba lomntu. Kwisiko lamaHindu bafana namaziko amandla, athi asasazeka emzimbeni womntu wonke.
Ngale ndlela, umbala wemibala esetyenzisiweyo kwimizobo iya kuba yindlela yokulungelelanisa ezi chakras kunye nokuvumela ukujikeleza okungcono kwamandla. Yiyo loo nto kuqinisekisa ukuphucuka kokubini ngokomoya nangokwasemzimbeni.
Ungayidweba njani imandala ekhaya?
Iimonki zifundisisa iminyaka ukwenza i-mandala enemibala. Nangona kunjalo, ngokuziqhelanisa okuncinci kunokwenzeka ukuba ufumane izibonelelo zobu bugcisa, ngaphandle komsebenzi omninzi. Ukwenza oku, unokuzoba iimilo zakho ngokulandela iingcebiso ezilula kunye neevidiyo kwiYouTube.
Okokuqala, kufuneka uzobe isangqa kwiphepha lephepha, njengoko i-mandala ngokoqobo ithetha "isangqa". Kuya kufuneka ulumke ukuba umzobo ugqibelele kangangoko kunokwenzeka ', kuba ungasebenzisa i ikhampasi okanye ipleyiti. Kungoko kuphela apho kuya kubakho ukufumana iziphumo ezilungileyo zokugqibela.
Ukulandela umkhondo wesangqa, kufuneka ufumane embindini kwaye ukrwele umgca. Emva koko zoba omnye umgca othe ngqo kwaye uqhubeke nokwenza oku de ufumane okwaneleyo. Le yimodeli esisiseko yazo zonke iimandala ofuna ukuzenza. Ukusuka apho, sebenzisa nje ukucinga kwakho kwaye ungeze izaphetha, iintyatyambo, iimilo zejiyometri, kunye namagama.
Kodwa khumbula, kufuneka babe nentsingiselo yobuqu kuwe kwaye kufuneka uzinikezele ngokupheleleyo kuloo mveliso. Xa umzobo ugqityiwe, faka umbala ngaphakathi, usebenzisa imibala eqaqambileyo, eqaqambileyo.
IMandalas ukuya kumbala ☸️
IiMandalas ziye zaduma kwihlabathi liphela. Ke ngoko, kukho ukhetho oluninzi kwimizobo ekulungeleyo kunye neencwadi zokubala. Oku kwenza ukuba abantu abaninzi bakhethe ukwenza oku xa bezama ukubaleka kwiingxaki zemihla ngemihla. Ukuba awunalo ixesha okanye ubuchule bokwenza i-mandala yakho, nantsi eminye imizobo onokuyiprinta nokupeyinta ekhaya. Phuma.
Ngaba zikho izibonelelo zokuyila i-mandalas?
Ewe, ii-mandala zisetyenziswe kangangeenkulungwane njengendlela yokuphucula uxinzelelo kwaye zinezibonelelo zokwenyani. Ngale nto, ukupeyinta imifanekiso kunokunceda ukunciphisa iifayile ze- unxunguphalo noxinzelelo . Kungoko unegalelo ekuphuculeni umgangatho wobomi.
Elinye inqaku elilungileyo malunga ne-mandalas kukuba ngenxa yokhetho lwabo lokomoya, banokuba luncedo kuye nabani na ofuna ukukhanyiselwa. Kulabo bafuna nje umdlalo omtsha, banokuba luqeqesho olukhulu ekuzobeni nasekupeyinteni izakhono.
Eyona fowuni zinamagingxigingxi, iifowuni ezingenakonakala: zeziphi onokukhetha kuzo
Uyisebenzisa njani iilensi zikaGoogle kwi-Android kunye ne-iPhone / i-iPad
I-OLED okanye i-QLED: yeyiphi eyona teknoloji ilungileyo yeTV ezintsha?
Indlela yokwenza ngokwezifiso i-Gmail ngezixhobo ezilungileyo
Ungawumamela njani umculo wasimahla noMncedisi kaGoogle kunye neNest